.ေယာက်ာ္းေတြကိုစိတ္နာ ဒီေနရာကို အတြဲလာ ကြဲေစ ဆိုတဲ့က်ိန္စာ (သို ့မဟုတ္) မိန္းမရဲ ေတာင္ေတာ္ သခင္မ သမိုင္း ..!, – Askstyle
ကေလာ အင္းေလး ပင္းတရ ဘုရားဖူးသြားရင္… ရြာငံေရျပာအိုင္မေရာက္ခင္ေလးမွာ…
မိန္းမရဲေတာင္ရဲ့အလွ အပကိုစိတ္ဝင္စားလို့သြားျကဘုရားဖူးျကFacebookမွာ ပုံေတြ ခဏခဏေတြ့ေနရေပမယ့္ အဲဒီေတာင္ရဲ ့သမိုင္းကို ေသခ်ာေရရာေအာင္ သိတဲ့သူက ခပ္ရွားရွား . က်ေနာ္စပ္စု စုံစမ္း ေမးျမန္းထားသေလာက္က ဒီလိုဗ်ိဳ ့. .
နာမည္က နန္းဧကရီေမႊး ဘုရင့္ သမီးေတာ္ တစ္ပါးေပါ့
အခ်စ္ဆိုတာက ဆန္းက်ယ္တယ္ေလ သူခ်စ္မိတာက
ေက်းေတာသား .ကုမၼာရ တဲ့ သူတို့ နွစ္ဦး ခ်စ္ျကည္နဴးေနတာကို
ဘုရင့္ ေရြနားေတာ္ေပါက္ျကား အမ်က္ပြားေစခဲ့တာမဟုတ္လား
အမဲရိုးက ဟင္းအိုးကိုမွအားမနာ ေက်းေတာသား ကုမၼာရ လူငႏြားကို သတ္ေစတဲ့ တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္ ့.ဒီသတင္း နန္းဧကရီေမႊးျကားေတာ့ ရင္ဝကို ဆယ္ေပါင္တူနဲ့ အထုခံရသလို ထင္ပါရဲ့ခ်စ္သူေမာင္ကို စိတ္ပူ နန္းေတာ္က ခိုးထြက္ အခ်စ္အတြက္ ေျခလွမ္းသြက္ခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့. . ကုမၼာရေက်းေတာသားကို လက္ဆြဲ ဘုရင္ျကီးနဲ့ ေဝးရာ ထြက္ေျပးရွာတယ္ေလ .အခု မိန္းမရဲေတာင္ရဲ အေရွ့ဘက္ ရြာအခြန္ေတြကို ေကာက္တဲ့ ကင္းေတာင္ဆိုတဲ့ ေန ရာအျဖတ္
ဒီေနရာက ျဖတ္သန္းဖို့ အဖိုးခ ေငြေတြ ေတာင္းေတာ့ ေပးစရာေငြက နတၴိ ကုမၼာရေက်းေတာ့သားေလး ေသြးပ်က္ျပီထင္ပါရဲ့. .
အခ်စ္ဆိုတာကို ယုံျပီး နန္းေတာ္က ထြက္ေျပး ဘုရင့္တပ္မေတာ္နဲ့ေဝးရာကို ေျပးခဲ့တဲ့ ဘုရင့္သမီးေတာ္ မ်က္နွာကိုမွမေထာက္ ကင္းခြန္ေတာ္ မေဆာင္နိုင္လို ့ရာဇဝတ္ေဘးေျကာက္ျပီး မင္းသမီးကို ခ်န္ထား သူ့ရြာေလးကို ျပန္သြားခဲ့တယ္ေလ.ဘုရင့္သမီးေတာ္ နန္းဧကရိေမႊးအတြက္ အားကိုးစရာ မရွိ ဘုရင့္အမ်က္ေတာ္ထိမွာကိုသိျပီး ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္ကိုကုတ္တက္ ေတာင္ရဲ့အေနာက္ဘက္ ေပ၆၀ခန္ ့နက္တဲ့ ေရဝဲျကီးထဲ စိတ္ကိုဒုန္းဒုန္းခ် အခ်စ္ကိုစိတ္နာ ခုန္ခ်ေလရွာရဲ ့. .
အခ်စ္ကို ဦးစားေပး ငါကေမာင္ေတာ္ကို ေရြးခဲ့တာေတာင္ ငါ့အခ်စ္ကို မေထာက္ ကင္းခြန္ေျကာက္လို့သစၥာေဖာက္ရက္တယ္တဲ့ .
အစိမ္းေသလို့ မကြ်တ္တဲ့ဘဝ အခ်စ္ကိုစိတ္နာ သူေပးတဲ့က်ိန္စာက ဒီေနရာကို အတြဲလာ ကြဲေစတဲ့ဗ်ာ. . . အဲဒီေတာင္ကို အရင္က မိန္းမဝဲ ေတာင္လို့ ေခၚေဝၚရာကေန ကာလေရြးလွ်ား မိန္းမရဲေတာင္အျဖစ္ထင္ရွားခဲ့တာေလ. ထူးဆန္းတာကရွိေသးတယ္ ေယာက္ေကာ္ ဘရေသ့ျကီးေပါ့
သူ ့အိပ္မက္ေပးတဲ့ နန္းဧကရီေမႊးဆိုတဲ့ ရွမ္းမင္းသမီးေလက မိန္းမရဲေတာင္ဆိုတာကို ျမန္ျပည္တစ္လႊားမွာရွာ သာသနာျပဳေပးပါတဲ့ ေယာက္ေကာ္ဘရေသ့ျကီးလည္း အိပ္မက္အရ ေတာင္ေတာ္ကို လိုက္ရွာရင္ ေတာင္ေတာ္ရဲ့အေရွ့ဘက္ ရြာငံ ေအာင္ပန္းကားလမ္းမျကီးမွာ ကားကသူ့အလိုလို စက္ရပ္လို့ ကားပ်က္သြားခဲ့တယ္ဆိုပဲ ကားဆရာက ျကိဳးစားျပဳျပင္ေပမဲ့မရ ညေနညိဳေစာင္း ကားလမ္းေဘးခ်ံဳေတာထဲမွ အစိမ္းေရာင္ဝတ္ ရွမ္းမေလးတစ္ေယာက္ထြက္လာတယ္ .ဘရေသ့ ရွာေနတဲ့ မိန္းမရဲေတာင္ဆိုတာ ေဟာအခုျမင္ေနရတဲ့ ျမင့္မားတဲ့ေ တာင္ေပၚဒဲ့ စကားေျပာျပီး ခ်ဳံေတာထဲျပန္ဝင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလရဲ ့. .ဆန္းက်ယ္လွပါဘိ.
ဒီစာကိုေရးေနရင္းေတာင္ က်ေနာ္ျကက္သီးေမႊးေတြြတစ္ျဖန္းျဖန္းထ ေျကာက္စိတ္ေတြ ဝင္ေနမိတယ္ဆိုတာ. .
သမိုင္းအက်ဥ္ေျပာျပေပးေသာမိန္းမရဲေတာင္ေတာ္ ေဂါပက အဖြဲ ့မွ ဘျကီးမွဳံအားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္#
မိန်းမရဲတောင်ရဲ့ အလှ အပကိုစိတ်ဝင်စားလို့ သွားကြဘုရားဖူးကြFacebookမှာ ပုံတွေ ခဏခဏတွေ့ နေရပေမယ့် အဲဒီတောင်ရဲ့သမိုင်းကို သေချာရေရာအောင် သိတဲ့သူက ခပ်ရှားရှား . ကျနော်စပ်စု စုံစမ်း မေးမြန်းထားသလောက်က ဒီလိုဗျို့. .
နာမည်က နန်းဧကရီမွှေး ဘုရင့် သမီးတော် တစ်ပါးပေါ့
အချစ်ဆိုတာက ဆန်းကျယ်တယ်လေ သူချစ်မိတာက
ကျေးတောသား .ကုမ္မာရ တဲ့ သူတို့ နှစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေတာကို
ဘုရင့် ရွေနားတော်ပေါက်ကြား အမျက်ပွားစေခဲ့တာမဟုတ်လား
အမဲရိုးက ဟင်းအိုးကိုမှအားမနာ ကျေးတောသား ကုမ္မာရ လူငနွားကို သတ်စေတဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်.ဒီသတင်း နန်းဧကရီမွှေးကြားတော့ ရင်ဝကို ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ အထုခံရသလို ထင်ပါရဲ့ ချစ်သူမောင်ကို စိတ်ပူ နန်းတော်က ခိုးထွက် အချစ်အတွက် ခြေလှမ်းသွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့. . ကုမ္မာရကျေးတောသားကို လက်ဆွဲ ဘုရင်ကြီးနဲ့ ဝေးရာ ထွက်ပြေးရှာတယ်လေ .အခု မိန်းမရဲတောင်ရဲ အရှေ့ ဘက် ရွာအခွန်တွေကို ကောက်တဲ့ ကင်းတောင်ဆိုတဲ့ နေ ရာအဖြတ်
ဒီနေရာက ဖြတ်သန်းဖို့ အဖိုးခ ငွေတွေ တောင်းတော့ ပေးစရာငွေက နတ္ထိ ကုမ္မာရကျေးတော့သားလေး သွေးပျက်ပြီထင်ပါရဲ့ . .
အချစ်ဆိုတာကို ယုံပြီး နန်းတော်က ထွက်ပြေး ဘုရင့်တပ်မတော်နဲ့ ဝေးရာကို ပြေးခဲ့တဲ့ ဘုရင့်သမီးတော် မျက်နှာကိုမှမထောက် ကင်းခွန်တော် မဆောင်နိုင်လို့ရာဇဝတ်ဘေးကြောက်ပြီး မင်းသမီးကို ချန်ထား သူ့ရွာလေးကို ပြန်သွားခဲ့တယ်လေ.ဘုရင့်သမီးတော် နန်းဧကရိမွှေးအတွက် အားကိုးစရာ မရှိ ဘုရင့်အမျက်တော်ထိမှာကိုသိပြီး မြင့်မားတဲ့ တောင်ကိုကုတ်တက် တောင်ရဲ့ အနောက်ဘက် ပေ၆၀ခန့်နက်တဲ့ ရေဝဲကြီးထဲ စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချ အချစ်ကိုစိတ်နာ ခုန်ချလေရှာရဲ့. .
အချစ်ကို ဦးစားပေး ငါကမောင်တော်ကို ရွေးခဲ့တာတောင် ငါ့အချစ်ကို မထောက် ကင်းခွန်ကြောက်လို့ သစ္စာဖောက်ရက်တယ်တဲ့ .
အစိမ်းသေလို့ မကျွတ်တဲ့ဘဝ အချစ်ကိုစိတ်နာ သူပေးတဲ့ကျိန်စာက ဒီနေရာကို အတွဲလာ ကွဲစေတဲ့ဗျာ. . . အဲဒီတောင်ကို အရင်က မိန်းမဝဲ တောင်လို့ ခေါ်ဝေါ်ရာကနေ ကာလရွေးလျှား မိန်းမရဲတောင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တာလေ. ထူးဆန်းတာကရှိသေးတယ် ယောက်ကော် ဘရသေ့ကြီးပေါ့
သူ့အိပ်မက်ပေးတဲ့ နန်းဧကရီမွှေးဆိုတဲ့ ရှမ်းမင်းသမီးလေက မိန်းမရဲတောင်ဆိုတာကို မြန်ပြည်တစ်လွှားမှာရှာ သာသနာပြုပေးပါတဲ့ ယောက်ကော်ဘရသေ့ကြီးလည်း အိပ်မက်အရ တောင်တော်ကို လိုက်ရှာရင် တောင်တော်ရဲ့ အရှေ့ဘက် ရွာငံ အောင်ပန်းကားလမ်းမကြီးမှာ ကားကသူ့အလိုလို စက်ရပ်လို့ ကားပျက်သွားခဲ့တယ်ဆိုပဲ ကားဆရာက ကြိုးစားပြုပြင်ပေမဲ့မရ ညနေညိုစောင်း ကားလမ်းဘေးချုံတောထဲမှ အစိမ်းရောင်ဝတ် ရှမ်းမလေးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ် .ဘရသေ့ ရှာနေတဲ့ မိန်းမရဲတောင်ဆိုတာ ဟောအခုမြင်နေရတဲ့ မြင့်မားတဲ့ေ တာင်ပေါ်ဒဲ့ စကားပြောပြီး ချုံတောထဲပြန်ဝင် ပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့. .ဆန်းကျယ်လှပါဘိ.
ဒီစာကိုရေးနေရင်းတောင် ကျနော်ကြက်သီးမွှေးတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထ ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်နေမိတယ်ဆိုတာ. .
သမိုင်းအကျဉ်ပြောပြပေးသောမိန်းမရဲတောင်တော် ဂေါပက အဖွဲ့မှ ဘကြီးမှုံအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်#